Bonke abantu bathanda izinto ezingafani. Omunye uqala wince iphunga lenyama wokushiswa kancane, kanye nezinye ubumnandi odla pepper pod nokungaliphuzi iwayini okunoshukela. Ngokuhamba ukuthuthukiswa yakhe, indoda usefunde ukuhlukanisa phakathi izinhlobo ezine ukunambitheka: okunosawoti, waba nenhliziyo ebuhlungu, amnandi futhi omuncu. amaseli ezizwelayo (ngamanye amazwi, ukunambitheka receptor) ukunambitheka waqonda. Zisebuhlotsheni isibani ekhethekile, ise-efihlekile.
Nambithani zemizwa ulimi zikhona 4 zilwane. Yehluka nomunye kwasendaweni nomumo:
- umtshingo (esisogwini phambi ingxenye ulimi);
- mushroom (eliseningizimu);
- leaf (esisogwini ebusweni lateral);
- ngentambo-like (ukwamukela kuphela isenzo mechanical lokushisa, kanye ukunikeza umqondo caustic, Ukuthoma, ukunambitheka astringent).
Ezinye zezilwane (amahhashi, izinja, izingulube) banekhono uzizwe ukunambitheka kwamanzi plain. Abasebenzisi, ngokuphambene, kungaba kuphela ukuqonda ukunambitheka ukungcola ehlukahlukene zamakhemikhali eziqukethwe ketshezi. Nambithani receptor khona isikhathi esifushane - kwezinsuku eziyishumi. Khona-ke zife, amasha akhiwa. Le nqubo ayibonakali abantu futhi okuqhubekayo.
izingxenye ezahlukene ebusweni ulimi babe okuhlonishwayo ezahlukene ejenti. Ezizwelayo ku-ebabayo impande ithiphu - izinyo elimnandi, onqenqemeni - ukuze okunosawoti. Kulokhu, iningi ukunambitheka omuncu futhi izinto ezibabayo indoda izizwa kanjani ngezinselele efanayo.
Kangakanani izinzwa zokunambitha? Okokuqala iza ulimi ketshezi. touch Khona kwenzeka, khona-ke umuntu uqala ukuzizwa ukunambitheka. izinto ezithile uyakwazi ekuthuthukiseni emizweni okwenziwa ukunambitheka efihlekile. Ngokwesibonelo, izinga iwayini ukunambitheka luphakanyiswa emva ushizi, bese amnandi kungase kubonakale omuncu kakhulu. Zizwe ukunambitheka kuzoncika yezinqubo zamakhemikhali bebiziwe ngolimi, kanye bezibona ukunambitheka ethile engqondweni. Ngokwesibonelo, menthol ukunambitheka kungenzeka zingachazwa ngezinqubo emizweni ezishisayo (ngenxa Ukupholisa wendawo ngenxa ukuhwamuka) kanye abukhali, okubabayo, evutha, astringent, mealy - Ukusabela Haptic. Uma sigibele umoya futhi ukunqanda ekhaleni, le mouthfeel Kungenzeka kakhulu ukushintsha: onion kuba mnandi njengoju lihhabhula. Uma iqhwa ngeminithi elilodwa kuphole ngolimi, ukunambitheka efihlekile ngeke uzizwe amnandi. Lokhu okuhlangenwe nakho zingenziwa noshukela.
Ngeshwa, ngezinye izikhathi la mangqamuzana ulimi banesibopho ukunambitheka, abaphumeleli. Kwangathi ukuthuthukisa ezwela anda - gipergevziya (uma kukhona ukudla kube nzima kakhulu), ongaphakeme - gipogevziya avgeziya futhi lokho kusho ukuthi akukho ukunambitheka. Zonke lezi zimo angase abe ne ukuvuvukala ngolimi (isicwebezelisi). Okungukuthi, kungaholela iqiniso lokuthi okuzwa ukudla ngeke zisaba ukusebenza kahle. Futhi, bezibona ushintsho ebonwe izifo ezithile isimiso sokugaya ukudla bungene (usawoti kubonakala amnandi). Kungenzeka sikashukela, kolwelwesi, ukuvuvukala kwesinye nenyongo.
Through the okuzwa ukudla ungaba ku womuntu ekwelapheni (zokwelapha) umphumela. uwoyela Garlic okwaziyo ukubhubhisa namagciwane umzimba, kwehlisa cholesterol kanye umfutho wegazi; uwoyela zokhuni wenza isinqandakuvunda futhi umsebenzi isisu kuyasiza kulesetayelekile umzimba izinqubo futhi kukhulisa kuyaqina isitsha izindonga; lavender has hypoglycemic, umsebenzi antiinflammatory futhi spasmolytic, nerosemary ancibilikisa ezinso futhi kwehlisa cholesterol. Nambithani receptor ukudlala indima ebalulekile yokuphila komuntu. Isignali ivela kubo, ulawula nangohlobo lwezinto uketshezi esiswini. Ngaphezu kwalokho, ukunambitheka - omunye kujabulisa kakhulu zokuphila kwansuku zonke.
Indlela yokwenza utshwala cindezela?
Kanjani ukubala isisindo ingane ngeviki sokukhulelwa?
Njengoba kuboniswe estrus e York?